'IJurassic Park' Reeboks Woza Ihlanganiswe e-Cryo Barbasol Can - iHorror
Ikhaya Izinto Ezipholile Zokuthenga 'IJurassic Park' Reeboks Woza Iphakhejiwe eCryo Barbasol Can
'IJurassic Park' Reeboks Woza Iphakhejiwe eCryo Barbasol Can
by UTrey Hilburn III July 19, 2021 2,669 ukubukwa
Akekho owayekhathalela ukuthi uDkt Lewis Dodgson wayehlangana noDennis Nedry, ngaphandle kukaDkt Lewis Dodgson. Kodwa-ke, sonke sasinakekela i-unit epholile kakhulu kaDodgson, 007 ebheka isitoreji seBarbasol cryo yeDino DNA engaba khona. Vele njengoba sazi, uNedry waphazamisa umsebenzi wokushushumbisa lawo maswidi esiqhingini, kepha akulishintshi iqiniso lokuthi abalandeli babeshaywa unomphela ngalezo zinhlayiya ze-rad cryo, amathini eBarbasol. Futhi, kubukeka sengathi uReebok naye angashaywa.
The latest Jurassic Park Ukubambisana kweX Reebok kuphole kakhulu. Kubaluleke kakhulu futhi ukuthi, ngenkathi ngilindele ukuthi le promo ibe ngeyokwakhiwa kwesicathulo esisodwa empeleni sithola imiklamo embalwa impela ngayinye enemibala yayo nokulingana kwayo.
Into ehlaba umxhwele kakhulu ngokubambisana konke nakanjani kuzoba ukupakisha kimi. Izicathulo ze-Omni Zone II ziza zifakwe kulowo super rad, jumbo osayizi weBarbasol can. Okuhle kunakho konke, kubukeka sengathi lumbozwe ngodaka, okusho ukuthi lokhu kufakwa kuzophakamisa ukuthi uNedry uphumelele ngempela emsebenzini wakhe wokushushumbisa. Qwayiza, qweba iso.
Iqoqo lonke leReebok lifaka izicathulo eziningi, kanye namanye ama-tee-shirts kanye nevesti ebukeka kahle impela. UReebok ulahla konke lokhu okukhona ngoJulayi 30, ngo-9 ekuseni i-CDT. Ungaqonda lapha ukubheka yonke imiklamo epholile… futhi lelo vesti… lelo vesti elimnandi, elimnandi.